Fivarotana ara-barotra avy amin'ny FXCC | | Currency Exchange
Home / Trading / kaonty / Trading Conditions
FXCC fepetra ara-barotra Forex
Ny mpivarotra ho an'ny varotra forex dia mila fifanakalozana ara-barotra ara-toekarena. Ny fepetra ara-barotra no mahatonga ny fifanakalozana mangarahara ho an'ny tompon-trosa rehetra ary manolotra sehatra maromaro amin'ny varotra varotra. Ny tabilao etsy ambany dia mamaritra ireo endri-pamantarana fototra amin'ny kaonty XL, Standard ary Advanced.
Hibebahana Azonao atao ny manamboatra ny toerana misy anao, kanefa tadidio fa ny fitantanana ny kaontinao dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra marihina mba hahafahana manakatona ny iray na maromaro amin'ny toerana voatokana. Ny kaonty Fuled Hedged dia tsy voatery hijanona. Raha toa ka mahatratra zero na ambany ny zon'ny kaonty misy anao noho ny antony rehetra (toy ny fielezan'ny vaovao na ny deduction), ny toerany misokatra dia hikatona ho azy. Ny FXCC dia manan-jo hanakatona ny ampahany na ny ampahany amin'ny toerana voatokana, mba tsy hisorohana ny mety hisian'ny fifandanjana ratsy noho ny fanelezana maro; Izany dia mety hampiharina amin'ny kaonty mihazona toerana be olona manana andraikitra kely.
Minimum Transaction Level 0.01 Lot 0.01 Lot 0.01 Lot Ny haben'ny fifanakalozana farafahakeliny amin'ny angovo sy ny indeksany dia 0.1 lot
Birao fandrakofana Ny raharaham-barotra rehetra dia tanterahina ao amin'ny tsenan'ny Inter-bank mampiasa STP (Faritra mivantana)
Automated Trading Azonao atao ny mampihatra ny paikady ara-barotra amin'ny alalan'ny Expert Advisor amin'ny MT4
Margin Call Level 100% 100% 100% Raha vao tonga any amin'ny Level Margin de 100% ny kaontinao, dia ho mailo ianao
Atsaharo ny tebiteby 50% 50% 50% Vantany vao mahatratra ny haavon'ny Margin dia mitovy amin'ny haavon'ny Stop Out na ambany ianao, ny rafitra dia hanidy ny fisokafanao misokatra. Marihina fa mety hampitombo hatrany ny haavon'ny Stop Out isika, araka ny heverin'ny FXCC.
Financial Instruments Pairs 28 volamena, sy volafotsy, Jereo ny lisitra feno Pairs 28 volamena, sy volafotsy, Jereo ny lisitra feno 200 + Financial Instruments, Jereo ny lisitra feno Azafady ampahafantaro ny ekipa mpanohana anay amin'ny fampahalalana fanampiny.
Deposit Currencies USD, EUR & GBP USD, EUR & GBP USD, EUR & GBP Ny vola azonao dinihina ny kaontinao
Re-Quotes Ny Birao Mahaleotena dia tsy midika hoe Resadresaka
Fichier prix 5 dingana valiny 5 dingana valiny 5 dingana valiny Ohatra: 0.12345
Atsaharo ny teboka 0.1 Pip 0.1 Pip 0.1 Pip 0.1 Mialà eo amin'ny tsenan'ny tsena, izany hoe afaka mametraka ny lozam-piaramanidina Stop Loss ao anatin'ny fizarana.
Tapa ambony sy ambany Bid Rate Bid Rate Bid Rate Ny taha ambony sy ambany amin'ny tabilao sy ny fiambenana ny tsena dia tahan'ny tolotra foana. Noho izany, rehefa mitazona ny toeran'ny Sell ianao dia mety hovonoina amin'ny taha ambony kokoa ny Stop Loss noho ny taha ambony voarakitra ao amin'ny MT4 Market Watch na Chart.
Fanapahana ambany indrindra 100 USD 10,000 USD 100,000 USD Na vola mitovy amin'ny vola hafa
Fialana ambany indrindra 50 USD 50 USD 50 USD Ho an'ny karazana kaonty rehetra
leverage 1: 1 - 1: 300 1: 1 - 1: 200 1: 1 - 1: 100 - Ny fampiasana volamena sy volafotsy dia 1: 100 ho an'ny kaonty rehetra.
Commission * AOTRA FX: 0.75 pip amin'ny lafiny iray
Metaly: $ 7.5 amin'ny lafiny iray FX: 0.4 pip amin'ny lafiny iray
Metaly. Energy & Indices: $ 4 amin'ny lafiny iray Mariho fa ho an'ny mpanjifitra nampidirin'ny antoko 3rd, dia mety hampiharina ao amin'ny XL Accounts ny fidiram-bola iray. Raha toa ka ampiharina ny sandam-bola dia ampahafantarin'ny FXCC ny mpanjifa alohan'ny ahafahana manao asa ara-barotra ao amin'io kaonty io.
rollover Mba jereo ny Pejy miroka ho an'ny antsipirihany bebe kokoa.
mihatra ny fepetra sy ny fepetra
FXCC Forex Trading ora
Ny fotoana fiasantsika isan'andro ho an'ny varotra from 17: 05 to 16: 55 New York Time (EST) ny Alahady ka hatramin'ny Zoma izay mitovy amin'ny 00: 05 mankany 23: 55 Server Time, Alatsinainy hatramin'ny Zoma, afa-tsy ny 25th ny volana Desambra sy ny 1st Janoary. Mandritra ny fotoam-pilaminana ny andro dia mihetsika ny fotoana andavanandro sy ny servatera araka ny fotoana any New York (EST).